နာရေး ကူညီ မှုအသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ (၁၅.၅.၂၀၁၀) နေ့ ရေကုသိုလ် ထပ်မံ ပြုလုပ်သည့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း
နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဆယ့်တစ်မီးငြိမ်းစေသည့် ရေအလှူ ကို (၁၅.၅.၂၀၁၀)ရက် နေ့တွင်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, May 15, 2010 Links to this post
အမျိုးသာဒီမိုကရေစီ ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ဘဘ ဦးဝင်းတင် အင်တာဗျူးရုပ်သံမှတ်တမ်း
Labels: ရုပ်သံမှတ်တမ်း, အင်တာဗျူး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ဤစာရင်းပါ အဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦး အား အနားပေးလိုက်ပါသည်..
၁။ ဦးခင်မောင်ဆွေ(ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင်)
၂။ DR သန်းငြိမ်း ( ဦးခင်ညွှန့်( ယခင် ဝန်းကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် မယား ညီအကို ))
၈။ ဦးကြီးမြင့် ( လာသာ ) (ရွှေဥရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်)
၁၂။ ကိုမြင့်ငွေ (ရေနံချောင်း ) ( လူငယ်လုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရေး)
စစ်အစိုးရကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးနေပါပြီ ရန်ကုန်မြို့ရှိစက်မှုဇုံ၊ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊မောလ်များ၊စူပါမားကတ်၊များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်လိုက်ပါပြီး
အဆိုပါညွှန်ကြားချက်အရ ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ထားမည့် ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများမှတစ်ဆင့် ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ခံရမည့် လုပ်ငန်းများထံသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့ခြင်းနှင့် ဓာတ်အားဖြတ် တောက်ခြင်းများကို မေလ ၁၄ ရက် နေ့ညနေပိုင်းမှစတင်၍ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ "မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျပ်စစ်ဓာတ်အားပေးတဲ့သမိုင်းမှာတော့ အဆိုးဝါးဆုံး ဖြစ်ရပ်လို့ဆိုရမှာပါ။ နာဂစ်တုန်းကပျက်တာကို လက်ခံခွင့်လွှတ်လို့ရပေ မယ့် အခုလိုလုံးဝဖြတ်တောက်မျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုနဲ့ ကန့်သတ်မှုမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလွဲမှားတဲ့မူဝါဒမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ စက်မှုဇုန်တွေတင်မဟုတ်ဘဲ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းတွေပါ မီးမပေးတာက လည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဖြတ်တာဆိုတော့ အခြားလုပ်ငန်းလုပ်မယ့်သူတွေအတွက်လည်း နောက်ဆိုရင် ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီး ထရန်စဖော်မာတပ်ဖို့ကိုတောင် စဉ်းစားရတော့မယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတင် မဟုတ်ဘဲ၊ ပြည်သူလူထုပါ ထိခိုက်နစ်နာမှာပါ" ဟု Eleven Media Group မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ "ကျွန်တော်တို့ တာမွေမြို့နယ်ထဲမှာတော့ Eleven Media Group ၊ စူပါဝမ်း စူပါမားကတ်၊ ILBC ၊ ရွှေဗဟို အထူးကုဆေးခန်း စတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ပါတယ်လို့သိရပါတယ်"ဟု လျှပ် စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်မည်ဟု အကြောင်းကြားစာရရှိပြီး ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ခံရသည့် တာမွေမြို့နယ်မှ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
ထို့ပြင် ယခုကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်မှု၏ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ဈေးတက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအချို့ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆေးခန်းကဲ့သို့ အများပြည်သူကို ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲများ တွေ့နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ''လျှပ်စစ်ဓာတ် အားဖြတ်တောက်မှုက ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျမသိရ သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နေ့စဉ် (၂၄) နာရီလုံးလုံး မီးစက်မောင်းဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ပုံမှန် အားဖြင့် တစ်နေ့ (၁၆) နာရီဝန်းကျင်ပဲ မီးစက်မောင်းနိုင်တာပါ။ ကျန်တဲ့ (၈)နာရီမှာ လူနာတွေကို ဒီအတိုင်းထားရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေအပါအ၀င် လူနာတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်တော့ ဒီအတိုင်းဆိုရင် အခက်အခဲရှိနေပါပြီ''ဟု စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အထူးကုဆေးခန်းကြီးတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
"ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ခံရတဲ့အတွက် (၂၄)နာရီ မီးစက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထုတ်ဝေနေတဲ့ ဂျာနယ်တွေကို လက်ရှိစောင်ရေထက် လျှော့ထုတ်မှရပါတော့မယ်"ဟု Eleven Media Group မှတာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
"စက်မှုဇုန်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လျှပ်စစ်မီး မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ (၃)ရက်လောက်က အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ စက်မှုဇုန်တွေ ပိတ်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ လည်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်စရိတ်နဲ့၊ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့လည်ရမယ်။ ကြားတာတော့ ထားဝယ်ဘက်က ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းပေါက်တယ်လို့ သိရတယ်။ အခုက မိုးမရွာတော့ ရေလည်းမရှိဘူး။ အဓိကကတော့ မိုးမရွာလို့ ရေမရှိတဲ့ပြဿနာပါ။ ဒါပေမယ့် (၂၄) လက်မပိုက်လိုင်းကတော့ ဆင်ပြီးသွားပြီလို့ သိရတယ်။ ပေးလို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ ပြန်ရမယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုတော့ ရန်ကုန်မြို့ကို အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ (၄) သုတ်ခွဲပေးမယ်ဆိုတော့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စက်မှုဇုန်တွေကို ရပ်လိုက်ရတာပါ။ လူထုကိုတော့ နဂိုရတဲ့ လျှပ်စစ်မီးပမာဏရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံပေးသွားမယ်လို့ သိရတယ်"ဟု စက်မှုဇုန်တာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့အနေဖြင့် မိုးကာလကုန်ဆုံးသည့် နိုဝင်ဘာလမှ မိုးတွင်းမရောက်မီ ဇွန်လခန့်အထိ (၇) လခန့်မှာ နှစ်စဉ် အချိန်ပိုင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့် ကာလဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ဤသတင်းအား weeklyeleven တွင်ဖော်ပြ ထားပါသည်.။
မြန်မာပြည်သူတွေ အပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့် သောက်သုံးရေ ခမ်းခြောက်နေသောဒုက္ခဘဝခံစားချက်တွေကို ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖြင့်ဖော်ပြပေးထားခြင်း
မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေမှု ဘဝ ပုံရိပ်တွေပါ
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေးစတစ်ကာ ကပ်ခဲ့သူ Mr.Garette နှင့် အင်တာဗျူး ( အပိုင်း ၂ )
မြန်မာပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
ဒီမေးခွန်ကိုဖြေဖို့တော်တော်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တိုင်း ပြည်ရဲ့အဖိုးအတန်ဆုံး အရင်းအမြစ်တွေပါ။ အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေများနေတဲ့ တိုင်းပြည်ထဲကို ကျနော်သွား တဲ့အကြောင်းကတော့ အဲ့ဒီပြည်သူတွေဆိအလည်သွားဖို့ပါဘဲ။ ဒါမှ သူတို့ဆီက သင်ယူနိုင်မယ်။ သူတို့နဲ့ ရင်းနှီး ခင်မင်နိုင်မယ်။ သူတို့ကို အားပေးထောက်ခံရာရောက်မယ်။ ဒီလောက်ဖိနှိပ်နေတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအောက် မှာ သူတို့ဟာ အပြုံးမပျက်နေနိုင်ကြတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ သူတို့ဟာ ဒီစနစ်ဆိုး၊ အခြေအနေဆိုးဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်မယ့် ဘ၀မျိုး ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့တွေ့ခဲ့သူအများစုကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အဆိုးမြင်ပြစ်တင်ကြတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ပြည်ပက တစ်ခုခုပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေပုံရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ပြည်ပကိုဘဲ စောင့်ဆိုင်းမနေဖို့နဲ့ စစ်မှန်၊ ခိုင်ခံ့ တဲ့ ပြောင်းလဲမှုဟာ ပြည်တွင်းမှာသာရှိကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပရောက်သူတွေအနေနဲ့ အားပေးမှု၊ လှုံ့ ဆော်မှု နဲ့ ထောက်ခံမှုလောက်ဘဲ လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက်ကသာ ဒီနှစ် ၂၀၁၀ အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူ သိသာတဲ့ဖြစ်ထွန်းမှု တွေ ဖြစ်လာလိမ့်မလား မျှော်လင့်နေကြတယ်။ အများစုကတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ကဆိုရင် NLD မပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကို မယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ မထောက်ခံကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဆန္ဒမဲလည်း သွားပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပါ တယ်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားများဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့ ၀တ္တရားရှိတယ်လို့ သင်ထင်ထားပါ သလား။
ရှိတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို မဖတ်ဘဲ မသွားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ စစ်အာဏာပိုင်တွေ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တွေတည်းခိုရတာ၊ သူတို့နဲ့ပတ် သတ်တဲ့လေကြောင်းကို စီးရတာ၊ မန္တလေးနန်းတော်ထဲ လည်ဖို့ပေးရတာကိုတောင် မှားနေတယ်လို့ ခံစားမိ တယ်။ ဒီငွေတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နည်းနည်းနဲ့ အားပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လေ။
စစ်အာဏာပိုင်တွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက်ငွေကိုချွေတာသုံးပြီး မြန်မာပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက်ထောက် ပံ့နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ရမယ်၊ လေ့လာရမယ်။ ဒါမှသာ သူတို့ဘာကို တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သိလာနိုင်တယ်လေ။
ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရှိနေ တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြသဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာ့အရေးဟာ မေ့ပျောက်ကောင်းတဲ့အရာ၊ လက်လျှော့ရ မဲ့အရာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပေးရပါမယ်။
ဒီမေးခွန်းအတွက် အောင်းဆန်းစုကြည်ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခုကို ကိုးကားပါရစေ။ သူမက “ သင်ဟာ မတရား မှုမှာ ကြားနေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဖိနှိပ်သူဘက်ပါတယ်လို့ဘဲ ပြောရမယ် ” ( If you are neutral inasituation of injustice, you have chosen to side with the oppressor. )။ ဒီစကားကို တောင်အာဖရိကမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး DesmondTu Tu လည်း သုံးဖူးသည်။ ( ဘာသာပြန်သူ )
သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ သင်နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဒေသခံလူတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေမလား။
ဒါဟာ အလွန်အလေးထားစရာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ချို့၊ လူတစ်ချို့နဲ့ ကြိုတင်ဆွေး နွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့သူများကို ကြိုတင်သတိပေးခဲ့တာကိုလည်း လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် စတစ်ကာကပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာလည်း တစ်ဦးနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သတ်မှုမရှိတဲ့ အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာတွေ မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို ဖမ်းတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကကော ခင်ဗျားကို ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ။ သင့် အနေနဲ့ ရှေ့နေရခဲ့သလား (သို့) သံရုံးက တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့သလား။
အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ မဖမ်းခင်ကတည်းက နောက်ကနေ တကောက်ကောက်လိုက်နေတာ ကျနော်သိပါ တယ်။ အဲ့ဒါဟာ တော်တော်သိသာပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ ဒေသခံလူတွေကလည်း အာဏာပိုင်တွေ က သူတို့ကို အနည်းဆုံး စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ မပျက်ကွက်ခဲ့ ပါဘူး။
ကျနော်ခရီးစဉ်အတိုင်း လက်မလျှော့ဘဲ လုပ်ကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် အမေရိကန်သံရုံးက အရာရှိတ ယောက်နဲ့စကားပြောပြီးကတည်းက ကျနော့်ခရီးစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာပါ။ ကျနော်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရနိုင်တယ်။ နှင်ထုတ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးပြီးသားပါ။ ကချင်ပြည်နယ်ကို သွားဖို့လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်အလွယ်တကူ အလျော့မပေးဘူး၊ မကြောက်ဘူးပေါ့။
မန္တလေးပြန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတစ်ချို့နဲ့ အရပ်ဝတ်အရာရှိ တစ်ချို့ ကျနော်တည်းတဲ့ တည်းခိုခန်းမှာ လာစောင့်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီနေ့ဘဲ မြန်မာပြည်က ထွက်ခွာပေးရ မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေမပြောကြပါဘူး။ အရာရှိတွေကလည်း အင်္ဂလိပ်စကားမပြောနိုင်ကြ ဘူး။ စကားပြန်ရှာဖို့လည်း ခက်တာနဲ့ ကျနော့်ကိုဘာမှ မေးမြန်းတာမလုပ်တော့ပါဘူး။ ကျနော့် ပတ်စ်ပို့ ကို ဘန် ကောက်သွားမယ့်လေယဉ်မတတ်ခင်အချိန်အထိ သူတို့ သိမ်းထားခဲ့ကြတယ်။
ကျနော်တည်းခိုခန်းကမထွက်ခွာခင် ကျနော်နှင်ထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးကို သတင်းပို့ပေးဖို့ အ ခြားနိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို စာရေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ တခြားနိုင်ငံခြားတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ မြန်မာပြည်မှာ ရှေ့နေတွေ့ဖို့ဆိုတာ တော်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော် မှတ်သိခဲ့ရပါတယ်။
မန္တလေးလေဆိပ်ကို တက္ကဆီနဲ့ခေါ်သွားတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း တက္ကစီ စီးနေစဉ် ကျနော် iPod နားထောင်ခွင့် ရတယ်။ ဘယ်သူမှကျနော့်ကိုစကားမပြောကြပါဘူး။ ကျနော်ထင်တာက ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ စစ်ဆေးကြ မှာပဲလို့ တွေးမိခဲ့တယ်။ ကျနော့်ကို လက်ထိပ်မခတ်ကြပါဘူး။ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမကိုင်တွယ်ကြပါဘူး။ လေ ဆိပ်မှာတော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက လူတွေထင်ပါတယ် ကင်မရာတွေနဲ့ စောင့်နေကြတယ်။ ကျနော့်ကို အချိန် ပြည့်ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြတယ်။ ကျနော့်ကို အစောင့်တစ်ယောက်နဲ့လေယဉ်ပေါ်တင်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာဘဲ ကျနော် MAI လေယဉ်စီးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လေယဉ်ရေချိုးခန်းမှာ ကျနော့်ရဲ့နောက်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးစတစ် ကာလေးကို ကပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေးက နေပြည်တော်(ကြပ်ပြေး)၊ ဒီနောက်မှ ရန်ကုန်ကို ကျနော်အပို့ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းထုတ် ခြင်း၊ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှာဖွေခြင်းတစ်ခုမှ အလုပ်မခံရပါဘူး။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ရုံးခန်းတစ်ခုရောက်တော့ “Blacklist 2005” စာရင်းဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျနော်က “Blacklist 2010” မှာ ကျနော့်နံမည်ပါမှာလားလို့ အရာရှိကိုမေးမိတယ်။ သူကသေချာတာပေါ့လို့ပြောတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ကျနော်လည်း စိတ်သက်သာသွားတော့ တယ်။
ဘာကြောင့်ကျနော့်ကို နှင်ထုတ်ရတာလည်းလို့မေးတဲ့အခါ “ ငါတို့မသိဘူး ” လို့ဘဲ အဖြေပေးကြတယ်။ ကျနော် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေဟာ ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်မှာဘဲဆိုတာ။ နောက်ဆုံး ကျနော့် ကို ဘန်ကောက်သွားလေယဉ်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး ကျနော့်ပတ်စ်ပို့စ်ကိုလည်း ပြန်ပေးခဲ့တယ်။
လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ အားလျော့သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုပြည်ပလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အာရုံစိုက်နေပါ တယ်။ ဘန်ကောက်ရောက်ရောက်ချင်း မိတ်ဆွေ ၁၅ ဦး လောက်ထံကို ကျနော်နှင်ထုတ်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဘေးကင်းတဲ့အကြောင်း အီးမေးလ်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် အီးမေးလ် အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီး ကျနော့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရေးသားပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာ BBC ကနေ ကျနော့်ကိုအင် တာဗျူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘလော့ခ် ၂၀ ကျော်ကလည်း ကျနော့်သတင်းကို ဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော့်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ The Best Friend Library နဲ့ အများကြီးဆက်စပ် နေပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ “ Burma VJ ” မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ချင်းမိုင်မှာ အရှင်သောပါကနဲ့အတူ ရှင်း လင်းပြသပါမယ်။ ဇွန်လ မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၂ ရက်ကြာမယ့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလည်း ဒုတိယအကြိမ် “ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက် ပွဲ ” ( Peace Walk ) ကို မဲဆောက်မှာလုပ်မလို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ငြိမ်းချမ်းရေး စတစ်ကာ အခု ၁၀၀၀၀ ထုတ်ဝေမယ်လို့လည်း သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ပြောင်းလဲ ရေးအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ဒေါ်စုပြော ခဲ့တဲ့ “ Please use your Liberty to promote ours. ” ဆိုတဲ့ မိန့်မှာချက်ကို အလေးထားရပါမယ်။
Translated - Alinsek
နာရေး ကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ၏ ဆယ့်တစ်မီး ငြိမ်းအေးစေမည့် ရေအလှူ
ဆယ့်တစ်မီး ငြိမ်းအေးစေမည့် ရေအလှူ
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၁၄ - ၅ - ၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးမြို့သို့ သွားရောက်ပြီး ဦးစွာ ပဲခူးမြို့ နယ်ခံဖြစ်သော ဦးကျော်ကျော်တို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ ရေလှူဒါန်းသော နေအိမ်များရှိ သောက်ရေကန်များနှင့် စက်ရေတွင်းများမှ သုံးရေ သောက်ရေများကို အသင်းမှ ငှားရမ်းထားသော ၂၂ ပေ အရှည်ရှိ ဟီးနိုးကားကြီးဖြင့် မိမိတို့ ၀ယ်ယူထားသော ပလပ်စတစ် ရေတိုင်ကီများဖြင့် ရေဂါလံပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ယင်းနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် က၀မြို့နယ် ကျေးရွာများရှိ ရေဘေးဒုက္ခသည်များဆီသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ နေ့လည်ပိုင်းတွင်လည်း ရေလိုအပ်လျက်ရှိသော ကျေးရွာများသို့ ထပ်မှန် သွားရောက်လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ ရေဘေး ဒုက္ခသည်များနှင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်း ၁၁ မီး ငြိမ်းအေးစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၁၁၀၀,၀၀၀/- (တစ်ဆယ့်တစ်သိန်းကျပ် တိတိ)ကို မတည် လှူဒါန်းငွေအဖြစ် စတင်ပြီး အလှူရှင်များ မှလည်း ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၄င်းခရီးစဉ်တွင် ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နှင့် အသင်းသားဖြစ်သူ ဦးစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်တို့ ဦးဆောင်ပြီး အသင်းသူ အသင်းသားများနှင့် နယ်ခံ လုပ်အားပေး လူငယ်များမှလည်း တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင် ခရီးတစ်ထောက်နားစဉ် မြို့ခံပြည်သူလူထု များမှလည်း လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပြီး ပဲခူးမြို့ လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအေးမြင့်၊ နယ်ခံတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သံဃာတော် တစ်ချို့မှလည်း လာရောက်ပြီး တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် စကားပြောကြားပါသည်။
(ရေလှူဒါန်းခြင်း အတွေ့အကြုံများနှင့် ခံစားချက်များကို ထပ်မံ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, May 14, 2010 Links to this post
ပန်းချီ သန်းမြင့်အောင် ဈာပန ဓါတ်ပုံများ
ပန်းချီ အနုပညာရှင် ကိုသန်းမြင့်အောင်သည် မေလ ၁၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ခွဲက ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ မေလ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး အအေးခန်းမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းပြီး ရေဝေး သုဿန်သို့ သယ်ဆောင် သဂြိုင်္ဟ်ခဲ့ပါသည်။
၄င်း ဈာပန အခမ်းအနားသို့ အနုပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ စာရေးဆရာများ၊ ပန်းချီဆရာများ၊ ကဗျာဆရာများနှင့် အတူ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ လုပ်အားပေး အသင်းသူ အသင်းသားများ တတ်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ (ပန်းချီသန်းမြင့်အောင်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင် မဟုတ်ပါ။)
သောက်ရေရဘို့ပြည်သူတွေကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးလက်ရေတွင်းတွေ တူးဖော်နေတယ်ဆိုတော့နအဖစစ်အာဏာရှင်များ ဒီတိုင်းကြည့်နေတာနားတွေမျက်စေ့တွေကန်းကုန်ကြ လို့လားရှင်
မင်းတုန်းမြို့နယ် ပန်းတောကျေးရွာတွင် သောက်ရေသန့်ရရှိရန် တစ်ဖက်ပိတ်ကန်တူးဖော်ပြီး ကန်ဘောင်အောက်ဘက်မှ လက်တူးတွင်းတူး၍ အသုံးပြုနေရကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ပန်းတောကျေးရွာသည် ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေးတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသော်လည်း တိုးတက်လာသောလူဦးရေ၊ တွဲဖက်အထက်တန်းကျောင်းတို့အတွက် သောက်သုံးရေ လိုအပ်လာသဖြင့်စာသင်ကျောင်းအနီးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စု၏ ထည့်ဝင်ငွေများဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် မြေကျင်းပေါင်း ၄၆၉ ကျင်းကို ငွေကျပ် ၁၁ သိန်းကျော် အကုန်ကျခံ၍ သုံးရေကန်တူးဖော်ခဲ့ပြီး တာဘောင်အောက်မှ လက်တွင်း များဖြင့် သောက်ရေကို အသုံးပြုနေရကြောင်းသိရသည်။
နွေရာသီရေခန်းချိန်တွင် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲရှိနိုင်သောကြောင့် မန္တလေးမြို့အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုဖြင့်သန့်ရှင်းသော မြေအောက်ရေရရှိနိုင်ရန် စက်ရေတွင်း နှစ်တွင်း ကို ပေ ၄၀၀ ကျော်အထိ တူးဖော်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ပန်းတောကျေးရွာမှ ရေရှိရေးအကျိုးဆောင်ဦးတင်လှိုင်က ပြောသည်။
ပန်းတောကျေးရွာတွင် ရာသီမရွေး သောက်သုံးရေအလုံအလောက် ရရှိနိုင်ရန် အသုံးပြုနေသော ရေကန်အား ထပ်မံပြုပြင်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာပြည်သူတို့၏လုပ်အား ထည့်ဝင်ငွေတို့ဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း weeklyeleven မှဖော်ပြပေးထားပါသည်.။
အာဏာရှင်မိသားစုရဲ့စိတ်တိုင်းကျသုံးဖြုန်းနေပုံ ထင်တိုင်းကျဲနေသော” စိန်စီသောည ”နှင့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဘဝ
စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင် မှန်အောင်ပစ်တယ် မိုးပေါ်ထောင် မခြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ စစ်ဘီလူးကြီး ဦးနေဝင်းရဲ့စကား
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မရှိဘူးလို့ ပြောင်လိမ်နေပေမယ့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင် အပါအဝင် နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ အကျဉ်းချခံထားရသူ တွေစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်ဟာ ယနေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးမှာရှိနေဆဲပါ
ပြည်သူ လူထု တွေကတော့ ယနေ့အချိန်မှာ ရေဘေး ဒုက္ခ၊ မီးဘေး ဒုက္ခ၊ မင်းဘေး ဒုက္ခ၊ လေဘေး ဒုက္ခ ၊တွေကတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ့ မဆိုင်သလို အာဏာရှင် တွေကလုပ်နေတုံးပါဘဲ.။ အာဏာရှင်မိသားစု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာကုန်ကျနေသော ငွေကြေးများမှာ ပြည်သူပိုင်ငွေများ သာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဘို့ ဆိုတာတော့အလွန်ဝေးလှပါသည်.။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို အာဏာရှင် မိသားစု မွေးသင့်ပါသည်.။
ကိုကျော်သူ ရဲ့ ခွေးသူခိုး နာဂစ်
ဝေးရပ်မြေမှ အလှူရှင်များက ငွေ၊ ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင်၊ အ၀တ်အစား၊ အစားအသောက် စသဖြင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များသို့ လှူကြ တန်းကြနှင့် လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များကလည်း စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် စည်းကမ်းရှိစွာ၊ တက်ကြွစွာ၊ အနစ်နာခံကာ ပေးဆပ်ကြနှင့်။ ရရှိလာသော အလှူပစ္စည်း၊ အလှူငွေများကို လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့ (ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အပါအ၀င် စည်းကမ်း စနစ်ကြစွာနှင့် ဒုက္ခသည်များရှိရာ နေရာဒေသ အသီးသီးသို့ ခဲရာခဲဆစ် ပင်ပန်းကြီးစွာ သွားရောက်၍ ဒုက္ခသည်များ၏ လက်ထဲသို့ ရောက်ရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြသည်။
မမြင်ဘူးသော စားသောက်ဖွယ်ရာများကို မြင်တွေ့သောအခါ .. သီလများ ချိုးဖေါက်မှုများ ဖြစ်လာတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ မည်မျှပင် စည်းကမ်းရှိ၊ တာဝန်သိ၊ သစ္စာရှိ၊ သီလလုံပါစေ။ အချို့သော လူမှုရေးသမား အမည်ခံတို့သည် ကွယ်ရာတွင် ဖေါက်လွဲ ဖေါက်ပြန် သီလများ ချိုးဖေါက် လာကြတော့သည်။
စေတနာရှင်များက မည်မျှပင် စေတနာအရင်းခံ၍ မိမိတို့၏ ချွေးနည်းစာ စုဆောင်းငွေ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာ ပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းပါစေ … ဒုက္ခသည်တို့၏ လက်တွင်းသို့ ဖေါက်ပြန်ရေး သမားများကြောင့် အပြည့်အ၀ မရောက်ရှိခဲ့ချေ။
ရှေ့တည့်တည့်မှ ဓါးပြပြီးထိုးမည့်လူ . . .
ကျွန်တော့်ကို လူ့ဘ၀ ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းမှာ လူပီသစွာ လူလူချင်း ကူညီဖေးမ ပေးဖို့များလားဟု ထင်မိတော့သည်။ ကျွန်တော်သည် စိတ်သန့်စွာ သီလလုံစွာ ကူညီပေးဆပ်မှုများကို ကုသိုလ်စိတ်နှင့်သာ လုပ်လိုသူဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်၏ နေအိမ်ခြံဝန်းသည်လည်း သစ်ပင်များကျိုး၊ ခေါင်မိုးများလှန်၊ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေစဉ် အချိန်ကာလ … ။
တစ်နေ့ … ကျွန်တော်တို့ အဆောက်အဦး ပနက်ချရန် ကိစ္စအတွက် မြောက်ဒဂုံခြံထဲသို့ သွားစဉ် … လုပ်အားပေးအဖွဲ့ လူငယ်များကလည်း ဓါးစက်များဖြင့် ချုံများကို ရှင်းလင်းနေခိုက် … ချုံထဲမှ အသံတစ်သံ ထွက်လာတော့သည်။ ( ဂွီး … ဂွီး … ဂွီး )ဟူသော အသံတစ်သံ ထွက်လာသည်။ လုပ်အားပေး လူငယ်တို့သည် ဓါးစက်ကို ရပ်၍ မ၀ံ့မရဲနှင့် တုတ်ရှည်များ၊ ဓါးများ၊ တူရွှင်းများ ကိုင်၍ ချုံကို ရိုက်တော့သည်။ အသံ ပိုကျယ်လာသည်။ ချုံတစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားသွားသည်။
လုပ်အားပေး လူငယ်တို့ နောက်သို့ ခြေတစ်လှမ်း ဆုတ်၍ ဓါး၊ တုတ်၊ တူရွှင်းတို့နှင့် အသင့်အနေအထားဖြင့် စောင့်ကြည့်နေသည်။ ချုံထဲမှ မဲမဲ သဏ္ဍန် လှုပ်ရှားလာသည်။ ၀ါ ကြင်ကြင် မျက်လုံးပြူးကြီး ထွက်ပေါ်လာသည်။ တစ်ယောက်သော လူငယ်မှ ချုံထဲသို့ အတင်းဝင်၍ ထိုသတ္တ၀ါအား ၀င်ရောက်လုံးတော့သည်။ ထိုလူငယ်လည်း ခေတ္တ ငြိမ်သွားသည်။ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ချုံထဲမှ ထွက်လာသော် … သူ၏ လက်ထဲတွင် ခွေးငယ်လေး တစ်ကောင် ပါလာတော့သည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ခွေးငယ်လေးပင် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရပ် မည်သည့်ဒေသ မည်သည့်ခြံမှ မသိ။ လသားအရွယ် ခွေးပေါက်ကလေးပင် ဖြစ်တော့သည်။ ထိုစဉ် မြောက်ဒဂုံခြံစောင့် စံအောင်မှ “ ဟာ .. ဒီခွေးစုတ် အမြီးလည်း မပါ .. ဟိုချုံထဲဝင် သည်ချုံထဲဝင် လုပ်လုပ်နေလို့ ကျွန်တော် ဂွနဲ့ ပစ်ပစ်ပြီး မောင်းထုတ်နေတဲ့ အကောင်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ အတူ ဒီကို ရောက်လာတာ ” ဟု ပြောတော့သည်။ ခွေးစုတ်ဟု ပြောလိုက်သောကြောင့် အားလုံး တွန့်သွားကြသည်။ အမှန်မှာ ယင်းခွေးငယ်လေးသည် ကာလတန်ဖိုးအားဖြင့် ငါးသောင်းမှ တစ်သိန်း ပေါက်ဈေး ရှိသည်။ ( ဒိုဘာမင် ) ခွေးမျိုးပင် ဖြစ်တော့သည်။ မည်သူမှ မကိုင်ချင် မယူချင်၍ အကြောက်လွန်၍ တုန်နေသော ခွေးငယ်လေးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ချီပိုး၍ ကားပေါ်တင်ကာ အိမ်သို့ ခေါ်လာခဲ့တော့သည်။ ပိန်လှီနေသော ခွေးလေးမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ အားတိုးဆေးများ ထိုးပေး၍ ၀၀ လင်လင် ကျွေးမွေးမှုကြောင့် ယခုဆိုလျှင် သန်မာထွားကျိုင်း၍ သူစိမ်းများပင် ကြောက်လန့်၍ အိမ်နားသို့ မကပ်ရဲကြပေ။
ယင်းခွေးငယ်လေးသည် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်အတူ ရောက်ရှိလာ၍ အမည်ကို “ နာဂစ် ” ဟု ငယ်စဉ်ကတည်းက ခေါ်ခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် ၂ နှစ်ပင် ရှိပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် … ဗီဇ ပါလာသည်။ ခိုးစားသည်၊ ခိုးကိုက်သည်၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အလွန်လုပ်သည်။ မီးဖိုခန်းမှ အိုးသံ ခွက်သံ ဇလုံသံ ကြားရလျှင် ဒီကောင် နာဂစ် လက်ချက်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ နံနက်လင်း၍ ကျွန်တော်တို့ ရုံးသွားမည် အလုပ် ကျွန်တော်တို့၏ ဖိနပ်များ ပျောက်နေလျှင် သေချာပြီ … ဒီကောင် နာဂစ် ကိုက်၍ တစ်စစီ ပြတ်သွားပြီ ဖြစ်တော့သည်။ အစားအစာ မည်မျှပင် ၀၀ လင်လင် ကျွေးကာမူ သူ၏ ဗီဇကို မဖျောက်နိုင်။
ထို့ကြောင့် … ကျွန်တော် အဆုံးသတ်ပါတော့မည်။
ဆုတ်ကပ်ကြီးတွင် မြန်မာပြည်တွင်မက ကမ္ဘာနိုင်ငံ အသီးသီးတို့၌ သဘာဝဘေးဒဏ်များ၊ ရန်သူမျိုး ငါးပါးဒဏ်များ … များစွာ ကြုံတွေ့ရဦးမည်။ ဆုံတွေ့ရဦးမည်။ ခံစားရဦးမည်။ သေကြ ကျေကြ ပျက်ကြ ဖျက်ကြဦးမည်သာ ဖြစ်တော့သည်။
ထိုသို့သော အချိန်အခါတွင် ရှေ့သို့ ဆက်လက်ချီတက် ပေးဆပ်၊ ဖေးမကြမည့် လူမှုရေးသမား စစ်စစ်တို့သည် . . . လူမှုရေး လုပ်စားကြသူ၊ သီလမလုံသူ၊ လိပ်ပြာမသန့်သူ၊ ဗီဇ မကောင်းသူ၊ နောက်ကျောမှ ဓါးနှင့် ထိုးမည့်သူ၊ နံဘေးမှ ဓါးနှင့် ထိုးမည့်သူ၊ ရှေ့တည့်တည့်မှ ဓါးပြပြီး ထိုးမည့်သူ … နာဂစ်လို ခွေးသူခိုးများကို အထူးသတိ ပြုကြပါရန် စေတနာ ရှေ့ထား၍ သတိပေးလိုက်ရပါတော့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, May 13, 2010 Links to this post
ပြည်သူတွေ ရေငတ် ရေပြတ်နေချိန်မှာနအဖအာဏာရှင်တွေကတော့ရေသန့် ဗူးလေးတွေကိုမာန်အပြည့်ဟန်အပြည့်နဲ့သောက်နိုင် လို့နေပါရဲ့လားရှင်။
ရေအသက် တစ်မနက်တဲ့။ ပြည်သူများ ရေငတ်ခြင်း ရေပြတ်ခြင်းဘေးမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ ဒီဆုတောင်းပြည့်ဖို့ ကတော့ တိုင်းပြည်မှာ အရည်အချင်းရှိရှိ ဥာဏ်ပညာအမြော်အမြင်ရှိရှိ တရားမျှတမှုရှိရှိ တိုင်းသူပြည်သားများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးလိုသောစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြည်သူ့ အစိုးရမျိုး ပေါ်ပေါက်မှသာလျှင် ဆုတောင်းပြည့်မှာပါ။
နအဖအာဏာရူးတွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် သောက်သုံးရေကန်တွေကြတော့ မတည်ဆောက်၊ နိုင်ငံခြားကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရောင်းစားဖို့ ကြတော့ ရေလှောင်ကန်တွေ အတင်းဆောက်။ ပြည်သူတွေအတွက် ရေပေးဝေရေး အဆင်ပြေဖို့ရေပိုက်လိုင်းတွေကြတော့ မတည်ဆောက်၊ နိုင်ငံခြားကို ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းစားဖို့ကြတော့ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်တွေ မဟားဒယားဆောက်။ ပြည်သူတွေအတွက် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ကရေတွေ သန့် စင်ပေးပြီး သောက်သုံးရေစီမံကိန်းတွေကြတော့ မဆောင်ရွက်၊ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းတွေကြတော့ တူးပြီး ညူကလီးယား စီမံကိန်းတွေကြတော့ ဆောင်ရွက်။ ပြည်သူတွေ ရာသီဥတု မျှမျှတတနေထိုင်နိုင်အောင် သဘာဝတောတောင်ရေမြေတွေကို ထိန်းသိမ်းတာမျိုးကြတော့ မလုပ်၊ နိုင်ငံခြားငွေရဖို့ အတွက် ရောင်းစားဖို့ ကြတော့ သစ်တောတွေ စိတ်ကြိုက် ခုတ် ဆိုတော့ အခုနွေရာသီအချိန် အပူပြင်းတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတော့ တွင်းရေတွေ ခန်းခြောက်တာကအစ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကအထိ ရေတွေ တိမ်ကောကုန်တာ ပိုဖြစ်တော့တာပါဘဲ။ ဒီအတွက် မြန်မာပြည်မှာ သောက်ဖို့ရေ မရှိ၊ သုံးစွဲဖို့ရေ မရှိ၊ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရေ မရှိ၊ မီးလောင်ရင် ဖြန်းဖို့ရေ မရှိ။ ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြည့်စုံအောင် မလုပ်ပေးတဲ့ မလုပ်နိုင်ဘဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်နေရင်တော့ ပြည်သူတွေအတွက် တစ်နေ့ စားဖို့ထမင်း၊ တစ်မနက်သောက်ဖို့ရေ ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံမယ်ဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ပါဖူး။
ပြောရဦးမယ့် အခြားအချက်တစ်ခုကတော့ နအဖသန်းရွှေတို့ ကတော့ နာဂစ်ဘေးကြုံတုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာက အလှူငွေတွေ ရက်ရက်ရောရောရလိုက်လို့နာဂစ်ကို ကျေးဇူးတင်နေသလို အခုလည်း ရေပြဿနာကြုံနေတာကို ဘန်းပြပြီး နိုင်ငံတကာက အလှူငွေတွေ တောင်းဖို့ကြံစီနေပြီထင်ပါရဲ့ ။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ပေါများလှတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူတွေ ရေငတ်ဘေး ကြုံနေရတာ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့်ဆိုတာထက် သောက်ရေသုံးရေ စီမံကိန်းတွေ၊ ရေလှောင်တာတမံ စီမံကိန်းတွေ၊ ရေပေးဝေရေး စီမံကိန်းတွေကို ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲ လစ်လျူရှူပစ်ပယ်ထားတဲ့ နအဖအာဏာရူးတွေ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချူပ်နေတဲ့ နှစ်ပေါင်းကြာ ဖြစ်နေတာရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ပြည်သူတွေ လက်တွေ့ ကြုံရတာပါဘဲ။ ပြည်သူတွေ နှစ်ကြာရှည်စွာ သောက်ရေသုံးရေ ပြတ်လတ်နေချိန်မှာ နအဖ သန်းရွှေတို့အာဏာရူး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးများတော့ စည်းစိမ်ခံပြီး ရေမီးအပြည့်အစုံနဲ့နန်းတော်ဆံဆံ တိုက်အိမ်ယာတွေမှာ နေကြ၊ စားသောက်ကြတော့လည်း ရေသန့် ဗူးက ရေကိုမှ သောက်သုံးကြဆိုတော့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင် ရှိပါသည်.။
၀န်ကြီးများအနေဖြင့် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် ညီ/မညီ၊ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ပြုနိုင်/မပြုနိုင် မေးမြန်းမှုကို တရားဝင်ဖြေကြား လိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ Mr. Larry M. Dinger က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းလိုကြောင်း၊ ၀န်ကြီးများ အနေဖြင့် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် ညီ/မညီ၊ ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ပြုနိုင်/မပြုနိုင် မြေမြန်းရာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးက ပါတီတည်ထောင်လိုသူများတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မပါဝင်ရန်သာ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် ရှိပါကြောင်း၊ ၀န်ကြီးများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဘဲ Political Post သာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၈ ၌ ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အာဏာ စတင်တည်သည့်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်အောက်၌ ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် တပ်မတော် အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၌ အမှုထမ်းရွက်ဆဲဖြစ်ကြသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက အခြားပြဋ္ဌာန်းခြင်း မပြုသမျှ ဆက်လက်အမှုထမ်းရမည်ဟု လည်းကောင်း၊ အခြေခံဥပေဒပုဒ်မ ၄၄၄(က) ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့၌ တည်ရှိနေသော အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တာဝန်ပေးအပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ မပေါ်ပေါက်မီ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု လည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားရှိ်သည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိဝန်ကြီးများက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တည်ထောင်ခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ပါကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးများက ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ ရှိပါကြောင်း၊ နောင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ်အရ ဖွဲ့စည်းမည့်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများသာ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုမပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၀၁၀ခုနှစ် မေလ ၁၂ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကျတော့ မတရားဖမ်းဆီးးထိမ်းသိမ်းအကျဉ်းချထားပြီး စစ်အာဏာရူးများ
ကျတော့၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကြိုက်သည့်ပုံစံ နှင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုဖော်ပြ
တော့ အရပ်ဝတ် တွေလုပ်လိုက် တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက် အုပ်ချုပ်ဘို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ကိုသုံးပြီးပြု
လုပ်နေတာဟာ လုံးဝလုံးဝ မတရား ခြင်းတခုသာ ဖြစ်နေပါသည်.။
နအဖစစ်အုပ်စု ၏လက်ထဲတွင် လက်နက်၊အာဏာ၊ဥပဒေ ၊ကိုကြိုက်သလိုသုံး၊လိုသလိုသုံးနေကြ
တာကတော့ ဒီသတင်းတခု နဲ့သက်သေ ဖော်ဆောင်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.။
မြန်မာပြည်သူအပေါင်းတို့ နအဖစစ်အစိုးရကတော့ ပြည်တွင်းသုံး ကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၂၄ လက်မပိုက်လိုင်း ရန်ကုန်မြို့သို့ သွယ်တန်းမှုပြီးစီးတဲ့ မီးတော့လာမယ်မထင်
မုတ္တမကမ်းလွန်မှ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွယ်တန်းလျက်ရှိသော အရှည် ၁၇၉ မိုင်ရှိ ပြည်တွင်းသုံး ၂၄ လက်မ ကမ်းလွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများအားလုံးပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါစီမံကိန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှ ရရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ပြည်တွင်း၌ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့၌ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည့် လျပ်စစ်တာဘိုင်ငါးလုံး ၀န်းကျင်အထိရှိကြောင်း၊ ယင်းဓာတ်အားပေး တာဘိုင်များကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ အသုံးပြု၍ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းစက်မှုဇုန်များ လုပ်ငန်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
''ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွယ်တန်းတဲ့ ၂၄ လက်မ ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို မုတ္တမကမ်းလွန်ကနေ ရန်ကုန်မြို့အထိ သွယ်တန်းပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုမှာ ကမ်းလွန်ပိုင်း ၉၃ မိုင်အရှည်ရှိပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းကတော့ ၈၆ မိုင် အရှည်ရှိပါတယ်။ ခုဆိုရင်ပိုက်လိုင်းအားလုံး သွယ်တန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
'အခု ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း မှာရှိတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ရုံတွေဖြစ်တဲ့ အင်းစိန်၊ ရွာမ၊ အလုံ၊ သာကေတ၊ လှော်ကားတွေအတွက် ဧရာဝတီတိုင်း ရေနံတွင်းတစ်ခုကနေ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကို ၂၄ လက်မပိုက်လိုင်းနဲ့ မကြာမီမှာ စတင်လွှတ်တော့မှာပါ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ရန်ကုန်မြို့တော်အတွက် မဂ္ဂါဝပ် ၆၀၀ ကျော်ကို ပေးနိုင်တော့မှာပါ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ မဂ္ဂါဝပ် ၃၀၀ ကျော်ကိုပဲ ပေးနိုင်သေးပါတယ်''ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း စက်မှုဇုန်တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကလည်း ''အခုဓာတ် ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေ အားလုံးပြီးစီးပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော် အတွင်းမှာရှိတဲ့ စက်မှုဇုန်လေးဇုန်ကို အခုလက်ရှိ မီးရရှိတဲ့ပုံစံထက်ပိုပြီး ရရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်'' ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုန်းတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းများ အပြီးသတ်လုပ်ငန်းများကို ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံခရိုင် အမာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေါ်ညိမ်းကျေးရွာအနီးတွင် Pipe Line Centre ထားရှိကာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတွင် ယခင်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀ သုံးစွဲရာမှ ယခုအခါတွင် စက်ရုံများတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် အိမ်သုံးလျပ်စစ်ပစ္စည်းများပိုမို သုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့် လျပ်စစ်မဂ္ဂါဝပ် ၅၅၀ ကျော်မှ ၆၀၀ အထိ တိုးချဲ့ သုံးစွဲလာကြောင်းလည်း သိရှိရ ပါသည်။
ရန်ကုန်ုမြို့ လှိုင်မြို့နယ် EPC မှ မတရား လျှပ်စစ်မီးဖြတ်တောက်ခံနေရသောရပ်ကွက်ကလေးမှပြည်သူအော်သံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် အရ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ အချိန်အလိုက် လျှပ်စစ်မီး ပေးနေရတာ အားလုံးအသိပါ၊ အဲဒီလို အချိန်ပိုင်း လျှပ်စစ်မီးပေးရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအလိုက် အနည်းဆုံး (၆) နာရီတော့ ပေးပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲဒီတစ်ရက် ခြောက်နာရီတောင် မရတဲ့ နေရာတစ်နေရာ ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ၊ လှိုင်မြို့ နယ်၊ ၃-ရပ်ကွက်က တိုင်းရင်းသား လုပ်သားပြည်သူ အများစုပါပဲခင်ဗျာ။ ညနေ ငါးနာရီဆို မီးလွတ်ပေးတယ်၊ ငါးနာရီ ၅ မိနစ်ဆို မီးပြန်ဖျက်လိုက်တယ်၊ အဲ ခုနှစ်နာရီလောက် မီးပြန်လွတ်ပေးတယ် ၊ ရှစ်နာရီ လောက် ဆိုပြန်ဖျက်လိုက်တယ်။ ညဆယ့်တစ်နှာရီ နောက်ပိုင်းဆို ပြန်လွတ်ပေးတယ်၊နာရီဝက်လောက်နေရင် ပြန်ဖျက်ပြန်ရော၊ အဲဒါညပိုင်းလာရက် ပြောတာနော်၊ နေ့ခင်းပိုင်းလာရက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ မပေးသလောက်နီးပါးပါပဲ။ ရာသီဥတုကပူ၊ မီးကပျက်၊ ရေကမလာနဲ့ အကုန်လုံး ငါးပျံကို လူးနေတော့တာပဲ၊ တစ်ကယ်ပါ ခင်ဗျာ မီးကို တစ်ရက်နေမှာ နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက်ပဲ လောက်ပဲရပါတယ်၊တစ်ခါတလေဆို တစ်နာရီလောက်တောင် မရချင်ဘူး။
လျှပ်စစ်မီးကို အဲဒီလောက် ဖြတ်နေရအောင် ဘာဖြစ်လို့၊ ညာဖြစ်လို့ ဆိုတဲ့ အသံလည်း မကြားရပါဘူး။ လှိုင်မြို့ နယ် EPC က ၃-ရပ်ကွက်ကို မီးဖျက်နေတာ တရားလွန်လွန်းပါတယ်၊ ဘေးက (၂) ရပ်ကွက်ရယ်၊ (၅) ရပ်ကွက် ရယ်ဆို (၃) ရပ်ကွက် မီးပြတ်နေပြီဆို ကြည့်လိုက် လင်းနေတာပဲ၊ အဲဒါနဲ့ အကုန်လုံးပျက်နေတာလား ဆိုပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ရပ်ကွက်တွင် လိုက်မေးကြည့်ပါတယ်၊ လာချိန်တန်လာတယ်၊ ပျက်ချိန်တန် ပျက်ပါတယ်တဲ့။ အေး မင်းတို့ ရပ်ကွက်လောက်တော့ မပြတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။
မျှမျှတတ ပေါ့ဗျာ၊ သူ့ကို ခြောက်နာရီ ပေးရင် ကျွန်တော်တို့ (၃) ရပ်ကွက်လည်း ခြောက်နာရီ လိုချင်တာပေါ့၊ အခုတော့ လှိုင်မြို့ နယ် EPC ရဲ့  မတရား လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်တောက်ခံ နေရတဲ့ ရပ်ကွက်ကလေးကို တာဝန်ရှိ သူတွေ လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး တရားမျှတစွာ လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဝေပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။
မေလ်းထဲသို့ ပေးပို့ပေးသည့် အတိုင်း ပြန်လည် မျှဝေ လိုက်ပါသည်.။
နအဖကရေအားလျှပ်စစ်တွေလုပ်နေတော့ ရေတွေခမ်းကုန်းပြီပေါ့ (ကာတွန်းသရော်ပုံ)
ပေးပို့ ပေးသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွန်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲ-နာဂိုယာ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
မန္တလေးမြို့တွင် ရာသီဥတုပူပြင်းလျက်ရှိပြီး မိုးရွာသွန်းမှု မရှိသလောက်နည်းပါးသည့်အတွက် ရပ်ကွက်အသီးသီးမှ မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ရန်ကင်းတောင် ငါးရံ့မင်းလိုဏ်ဂူအတွင်းရှိ ဘုရားအလောင်းငရံ့ မင်းရုပ်ထုကိုပင့်ဆောင် ကာ ငါးရံ့မင်းပရိတ်များရွတ်ဖတ်သည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများပြုလုပ်၍ မိုးခေါ်လွန်ဆွဲပွဲများ ကျင်းပကြလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
"ပုံမှန်ဆိုရင် သင်္ကြန်မတိုင်မီမှာ သင်္ကြန်လက်ဆေးမိုး ရွာလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဝန်းကျင်မှာ မိုးသည်းကြီးမည်းကြီး ရွာလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မိုးက တော်တော်ခေါင်လေတော့ မီးရေးထင်းရေးသာမက သောက်ရေသုံးရေ ပါ ရှားပါးလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း မန္တလေးမြို့ပေါ်က မြန်မာအများစုနေတဲ့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ မိုးခေါ်လွန်ဆွဲပွဲတွေကျင်းပကြတယ်။ မိုးခေါ်လွန်ဆွဲတယ်ဆိုတာ ရှေးကတည်းကကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲပေါ့။ လွန်မဆွဲမီ မိုး ခေါင်ကျော်စွာနတ်ကိုပင့်ပြီး မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေးတစ်ဖက်စီ လွန်ဆွဲကြလေ့ရှိပါတယ်"ဟု လူကြီးသူမတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
ယင်းရိုးရာလွန်ဆွဲပွဲများကို ဆိုင်းသံဗုံသံများဖြင့်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး မိုးခေါင်ကျော်စွာနတ်ကို ပင့်ဖိတ်ပူဇော်ကာ ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများနှစ်ဖက်အပြိုင်အဆိုင် သူနိုင်ကိုယ်နိုင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းအား weeklyeleven တွင်ပါဝင်သောကြောင့်ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, May 12, 2010 Links to this post
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျ၏ ဇနီးဒေါ်ခင်တင့်(၈၅)နှစ် ကွယ်လွန် (ဟေမာနေဝင်း၊ ရာဇာနေဝင်း နှင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့၏အဘွား )
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျဇနီး ဒေါ်ခင်တင့် (၈၅) နှစ် ကွယ်လွန်
စစ်အစိုးရသတင်းစာတို့က “ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်” စာသားကို ဆင်ဆာဖြတ်
ယမန်နေ့ နံနက် အစောပိုင်း ၂ နာရီ ၀န်းကျင်က ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်တင့် ၈၅ နှစ်ဟာ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း အမှတ် ၁၁ နေအိမ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ ဈာပနကို ညနေ ၄ နာရီခွဲ အချိန်က ရေဝေးသုဿန်မှာ မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဈာပနကို ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကွယ်လွန်သူကို ရည်စူးပြီး မေလ ၁၆၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားတော်နာယူမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှတ် ၁၁၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား ၂ ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် နေအိမ်သို့ ကြွရောက်နိုင်ရန် ဆွေမျိုးမိသင်္ဂဟများကို ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ ဈာပနကို မီးသဂြိုဟ် ပြီးစီးကြောင်းနဲ့ ရည်လည်ဆွမ်းသွပ်တရားနာ ကြွရောက်နိုင်ရန် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှာ နာရေးကြော်ငြာထည့်တဲ့အခါ ကြေးမုံသတင်းစာက ဗိုလ်ဇေယျရဲ့ အမည်ရှေ့မှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဆိုတဲ့စာသားကို ဖြုတ်ခိုင်းပြီး၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျလို့ ဖော်ပြချင်ရင် အထက်သို့ဆက်လက် တင်ပြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ခင်တင့်ရဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျနဲ့ ဇနီးဒေါ်ခင်တင့်တို့ဟာ ဒေါ်ခင်မာလာ၊ ဒေါ်နီနီ၊ ဒေါ်မြသီတာ၊ ဒေါ်အင်ကြင်းဇေယျ၊ ဒေါ်ဧကရီဇေယျ စတဲ့ သမီး ၅ ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ မြေး ၁၅ ဦး၊ မြစ် ၁၅ ဦး ရရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အဆိုတော် ဟေမာနေ၀င်း၊ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ရာဇာနေ၀င်း၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ဟာ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဒေါ်ခင်တင့်တို့ရဲ့ မြေး တော်စပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
နာရေး ကူညီ မှုအသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ (၁၅.၅.၂၀၁၀) နေ့ ...
အမျိုးသာဒီမိုကရေစီ ဌာနချုပ်ရုံးတွင် ဘဘ ဦးဝင်းတင် ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မှ ဤစာရင်းပါ အဖွဲ့ဝ...
မြန်မာပြည်သူတွေ အပူချိန်လွန်ကဲမှုကြောင့် သောက်သုံးေ...
မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်နေမှု ...
မြန်မာပြည်တွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေးစတစ်ကာ ကပ်ခဲ့သူ Mr....
နာရေး ကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ၏ ဆယ့်တစ်မီး ငြိမ်းအေး...
ပြည်သူတွေ ရေငတ် ရေပြတ်နေချိန်မှာနအဖအာဏာရှင်တွေကတော...
မြန်မာပြည်သူအပေါင်းတို့ နအဖစစ်အစိုးရကတော့ ပြည်တွင်...
ရန်ကုန်ုမြို့ လှိုင်မြို့နယ် EPC မှ မတရား လျှပ်စစ်...
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ဇေယျ၏ ဇနီးဒေါ်ခင်တင့်(၈၅)နှ...
Kurt Campbell ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒုတိယ ခရီးစဉ် ရုပ်သံမ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဘဘ...
ရန်ကုန်မြို့ တွင် အမျိုးသမီးတဦးအားသူ၏နေအိမ်သို့တက...
မဲဆောက်တွင် တရားမဝင်အလုပ်သမား(၃၀၀)ခန့် အားထိုင်းအစ...
သမိုင်းဝင် ဒေါင်း အလံအား အလွဲသုံးစားလုပ်သူ အေးလွင်...
မြောက်ကိုရီးယား မှ လက်နက် တင်သွင်းမှု နှင့် ပတ်သက်၍...
U.S. "profoundly disappointed" at Myanmar polls
အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကာ့တ်ကမ့်...
တပ်မတော်အပေါ် သစ္စာဖောက်ပြီး ပြည်သူတွေကိုပါ လိမ်ပြီး...
လူကြီးဖြစ်သူ အောင်သိန်းလင်း ကိုယ်တိုင်က ဘုရား မသိ ...
ယနေ့ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတ...
လူထုစိန်ဝင်း ရဲ့ ပြောပြီးရင်လည်း ထပ်ပြော နေရတာပါဘဲ...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင်ရောက်ရှိနေတဲ့ ရန်ကုန်မြိ...
နအဖ ကအေးချမ်းသာယာပြီးခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် န...
အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့ ကန့်(မ်)...